HS:-Shirar heer caalami ah oo ay masuuliyiinta dowlada siiba madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirkiisa arimaha dibada Marwo Fowzia ay ka wadeen dibada si beesha caalamka looga dhaadhiciyo in dalka Soomaaliya iyo bulshadeedu aheyn wax badan oo lagu tilmaamo.
Warbixin ay dhawaan soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha warbixina ka qortay xaalada Soomaaliya ayuu siweyn u soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya kadib markii la xaqiijiyey jiritaanka arintaas soo dhaweyntaas oo indhaha beesha caalamka u muujisay in uu dalka Soomaaliya lugaha la galay isbedel muuqda oo dhinaca siyaasada ah maadaama siweyn looga dareemayo biseyl siyaasadeed hogaanka cusub ee dalka.
Dowlada Soomaaliya oo dhawaan laga qaaday xayiraadii hubka waxaa hada ku soo fool leh hubkii ugu horeeyey kaasi oo iskugu jira noocyada kala duwan ee ay ciidamadu u baahan yahiin. mar hadii siyaasadii gud ee dibada lagu guuleystay waxey u muuqataa in ay dowladu u soo jeesaneyso wax ka qabashada arinaha gudaha iyo maamulada gobolada oo ah caqabadaha ugu weyn ee hada dowlada ka heysta dalka Soomaaliya.
La soco wararkeena danbe iyo arimaha dowlada,
· admin on March 29 2013 13:15:55 · 0 Comments · 1485 Reads ·
14,934,176 unique visits